चिकित्सकले अब एउटै संस्थामा काम गर्नुपर्ने, ‘सुरु तलब १ लाख हुनुपर्छ’: डा. कार्की – Health Post Nepal
२०७७ जेठ १६ गते ११:०७
अब चिकित्सकले एकभन्दा बढी संस्थामा काम गर्न नपाउने भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट कार्यक्रममार्फत् सरकारले चिकित्सकलाई एकभन्दा बढी संस्थामा काम गर्न नपाइने व्यवस्था सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।
यो सँगै सरकारी चिकित्सकले अब सरकारी अस्पतालमा मात्रै काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताए।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था’को व्यवस्था सुरुवात गरिने घोषणा गरेका थिए । सरकारले त्यसका लागि चिकित्सकलाई विशेषभत्ता सुविधा थप गर्नका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ।
बजेटले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँचसहितको आधारभूत सेवा विस्तार गर्न ५ अर्ब १० करोड वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्था गरेको छ।
कतिपयले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यको घोषणालाई प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा एक चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने निर्णयको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
डा. देवकोटाले बजेटमा भएको घोषणाको अर्थ चिकित्सकले एउटा संस्थामा आबद्ध भएपछि अर्को संस्थामा काम गर्न नपाइने भन्ने भएको बताए।
यसअघि सरकारी चिकित्सकले मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर कार्यालयबाहेकको समयमा प्राइभेट अस्पतालमा समेत काम गर्न पाउँने व्यवस्था थियो।
नयाँ घोषणासँगै त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै यो व्यवस्था लागू गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘अहिले वीरमा मेडिकल अफिसरले ४० हजार पाउँछ, त्यति पैसाले परिवार पाल्न, बच्चा पढाउन नपुगेरै ५ बजेपछि घर नफर्केर निजी प्राक्टिसमा जाने हो’ डा. कार्कीले थपे, ‘हामीलाई पनि प्राइभेट प्राक्टिस गर्ने रहर छैन बाध्यता हटाइदिने हो भने यो निर्णय राम्रो छ’
अहिले सरकारीतर्फकै कतिपय प्रतिष्ठान, समुदायस्तरका केही संस्थाले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था लागू गरिसकेका छन्।
यसअघि सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ को ६.८.४ र १५औं योजनाको रणनीति ४ को २ मा एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्थाको कार्यक्रम सुरु गर्ने उल्लेख छ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको नीति आफूहरूको पनि माग भएको भन्दै तर अहिलेकै अवस्थामा यो लागू गर्न खोजे अधिकांश चिकित्सकले सरकारी सेवा छाड्ने अवस्था आउने बताए।
‘यसका लागि मेडिकल अफिसरको तलब न्युनतम १ लाखबाट सुरु भएर सोअनुसार समयोजन हुनुपर्छ’ डा. कार्कीले भने, ‘एउटा एमबिबिएस पढेको शुल्क राज्यले नै ५० लाख तोकेको छ, डाक्टरी पढ्न समय र मिहिनेत पनि बढी लाग्छ अनि अरु कर्मचारीसरह सुविधामा काम गर भनेर हुन्छ ?’ डा. कार्कीले भने।
डा.कार्कीले अहिले नेपालका सार्वजनिक क्षेत्रकै धरानजस्ता प्रतिष्ठानले यो लागू गरिरहेको भन्दै त्यहाँ चिकित्सकले धेरै राम्रो सुविधा, रिसर्च ग्रान्ट, क्वाटरजस्ता सुविधा पाइरहेको समेत बताए।
‘अहिले वीरमा मेडिकल अफिसरले ४० हजार पाउँछ, त्यति पैसाले परिवार पाल्न, बच्चा पढाउन नपुगेरै ५ बजेपछि घर नफर्केर निजी प्राक्टिसमा जाने हो’ डा. कार्कीले थपे, ‘हामीलाई पनि प्राइभेट प्राक्टिस गर्ने रहर छैन बाध्यता हटाइदिने हो भने यो निर्णय राम्रो छ।’